ပါဝါရုံရွှေပန်းမြိုင် စေတီတော်တွင် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါဒစက်တော်ရာ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ ~ Myaylatt Daily.
ပါဝါရုံရွှေပန်းမြိုင် စေတီတော်တွင် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါဒစက်တော်ရာ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
ပွင့်ဖြူ ဧပြီ ၆
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ဘုရားကုန်းကျေးရွာအနီးရှိ ကဿပဘုရားရှင် သီတင်းသုံးတော်မှုခဲ့သည့် ပါဝါရုံ ရွှေပန်းမြိုင်စေတီတော်တွင် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါဒစက်တော်ရာ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ဧပြီလ(၆)ရက်နေ့ နံနက် (၈)နာရီက ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပါဒစက်တော်ရာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ရှေးဦးစွာ ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖဲကြိုးအား ရွှေပန်းမြိုင်စေတီတော် နာယကဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဇောတိက၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး အောင်ဆန်းမြင့်နှင့် ရွှေပန်းမြိုင် စေတီတော် အကျိုးတော်ဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖိုးပါတို့မှ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများမှ ပါဒစက်တော်ရာ ဖွင့်ပွဲဆိုင်းဘုတ်အား ရတနာကြိုးဆွဲ၍ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ထို့နောက် နာယကဆရာတော်ကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော် များမှ ပါဒစက်တော်ရာအား အမွှေးနံ့သာရည်များပက်ဖြန်းပူးဇော်ပြီး အောင်ဂါထာရွတ်ဆို၍ ပန်း၊ဆီမီး၊ရေချမ်းနှင့် သစ်သီး ဆွမ်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များမှ (၁၀၈)ကွက် စက်လက္ခဏာဘုရားရှိခိုးပူဇော်ပြီး သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များမှ ဗုဒ္ဓဘိသေက အနေကဇာတင်၍ ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကာ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ဗုဒ္ဓသာသနာ စိရံတိဋ္ဌတု သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍ ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပါဝါရုံ ရွှေပန်းမြိုင်စေတီတော်သည် ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဘုရားလေးဆူကြွရောက် သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သော ရုံလေးရုံ၊အောင်မြေလေးနေရာများအနက် တတိယပွင့်တော်မှုသော ကဿပဘုရားရှင် သီတင်းသုံးတော်မှုခဲ့သောနေရာအား စေတီတည်ထားသော အောင်မြေနေရာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဂန့်ဂေါတွင် မျက်စိအခမဲ့ကုသပေးမည်ဖြစ်ရာ လုပ်ငန်းလို...
ဂန့်ဂေါမြို့ ကုတင် ၁၀၀ ဆေးရုံသို့ INFOSION PUMP လှ...
သက်တမ်းတိုးမှုများအပေါ်တွင် ကုန်သွယ်ခွန် ကောက်ခံမည်...
မကွေးဝန်ကြီး ကွီးးမိုးးးး အပြတ်ဆော်တော့မည့်။ ကျပ်...
ပြန်ကြားရေးနှင့် Sky Net တို့၏ အကျိုးအမြတ်စာချုပ် ...
သမ္မတကြီးကိုယ်​တိုင်​က အစိုးရကို ​ဝေဖန်​​ထောက်​ပြကြ...
ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုစုပါ့မယ် ဗျူဟာလိုပါတယ
ဟင်းချက်ဒယ်နီအိုးမှ အပူရှိန်လွန်ကဲရာမှ တစ်ဆင့် ဂန်...
လယ်ယာမြေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခင် အမှားလုပ်ခဲ့သူ များက...
နိုင်ငံရေးပါတီဘက်ကို ခြေချတော့မယ့် ၈၈ မျိုးဆက်များ
မန္တလေး မြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ်မှာ.. အပြုသဘောဆောင်ပီး သံချ...
The Diplomat ထဲက ဆောင်းပါး ကောက်နှုတ်ချက်
အကျဉ်းထောင်က အလင်းရောင် - တင်မိုး
၂၀၁၇ ခုနှစ် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း...
ပထမ | ဒုတိယ | တတိယ ❆ ယခုနှစ် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း
မန္တလေး အထွေထွေ ရောဂါကု ဆေးရုံသို့ သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ၏ နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်း ၊
မကွေးတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ဟောင်း ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံ ...
မဟာသင်္ကြန်ကာလတွင် ကျင်းပလေ့ရှိသည့် သိန်းကျင်း ရွှေတန...
မုန်တိုင်းငယ်သတိပေးချက်အရ ရွှေစက်တော်ဘုရား ဘုရားဖူး...
ပွင့်ဖြူမြို့ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလအတွင်း မှုခင်းများ...
သားကြီးထွန်းဝင်းကျော်၏ ကောင်းမှုကြောင့် အဖေ ဒုလ္လဘဝ...
ယောမြို့ရှိ ကျောင်းကြီးရှင်ချစ် စေတီတော် ဗုဒ္ဓပူဇနိ...
၁၂/ ၄/၂၀၁၇ မှ ၁၈/၄/၂၀၁၇ ထိ တရားရှာသည်။
မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော် နှစ်ဆန်း(၂)ရက်တွင် ပိတ်...
ယထာဘူတံ ဉာဏဒသ်သနံ ၂၀၂၀ အတွက်အချက်ပေးခေါင်းလောင်းထိ...
ဒန့်ဒလွန်ပင် တိုက်နဟ်ဆေးရုံသစ် ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
~ ဒု နဲ့ ဒေး ~~~
ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန နှp FOR Y...
လေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်...
ပါဝါရုံရွှေပန်းမြိုင် စေတီတော်တွင် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါဒစက်...
မကွေးမြို့တွင် ငွေကျပ်သိန်း(၆၅၀၀)ကျော်ခန့် အကုန်အက...
ဇင်လင်း ● အိပ်ပေါက်နှင့် ဖားကောက်နေသည့် မြန်မာ့စီး...
ငွေကျပ် ၇ ဘီလီယံခွဲ ပျောက်ဆုံးမှု မကွေးတိုင်း ဝန်ကြ...
ကာရာအိုကေ မီးလောင်မှုကြောင့် လူ ၁၅ ဦး သေဆုံးခဲ့မှု ...
ငွေကျပ် ၇ ဘီလီယံခွဲပျောက်ဆုံးမှုတွင် USDP အတွက် ၁ ဒ...
မြို့သစ်မြို့နယ် နင်းကြမ်းကျေးရွာ တိုက်နယ် ဆေးရုံဖ...
မကွေးမြို့ ရွှေမြတ်မင်းသမီး ကာရာအိုကေ အဆင့်မြင့်အအေ...
သောက်သုံးရေပြတ်လက်မှုကြုံတွေ့ရသော ကျေးရွာများအားေ...
မီးဘေးသင့် အိမ်ထောင်စုအား မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသ...
ဓါတုလွတ် တန်းဖိုးမြင့် သီးနှံ (မိုးကြိုနှမ်း) ဈေး...
မကွေးမြို့တွင် တိုင်းဒေသကြီး လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတ...
ဥကပ်ပါးနဂျီဖြင့် စပါးဖျက်ပိုး နှိမ်နင်းခြင်း တောင်...